ESI IBUDATA VIDIYO SITE NA PERISCOPE KA KỌMPUTA - WINDOWS - 2019
Nbudata vidiyo site na Periscope na kọmputa
Ndị ọrụ Ịntanetị na-arụ ọrụ karịa ugboro ugboro gafere site na ndebanye aha na ihe dị iche iche. N'otu oge ahụ, iji laghachi na saịtị ndị a, ma ọ bụ na-eduzi omume dị iche iche na ha, a chọrọ njirimara onye ọrụ. Ya bụ, ịkwesịrị ịbanye aha njirimara na paswọọdụ ọ nwetara n'oge ndebanye aha. A na-atụ aro ka ịnwe paswọọdụ pụrụ iche na saịtị ọ bụla, ọ bụrụ na o kwere omume, nbanye. A ghaghị ime nke a iji hụ na nchebe nke akụkọ ha sitere na nchịkwa aghụghọ nke ụfọdụ ihe onwunwe. Mana otu esi echeta ọtụtụ logins na okwuntughe, ma ọ bụrụ na ị debara aha na ọtụtụ saịtị? Ngwaọrụ ọkachamara pụrụ iche nyere aka mee nke a. Ka anyị chọpụta otu esi echekwa okwuntughe na Opera nchọgharị.
Usoro Ntube Ntuziaka
Opera nchọgharị nwere onwe ya wuru-na ngwá ọrụ nke na-azọpụta ikike data na weebụsaịtị. Enwere ike site na ndabara, ma na-echeta ihe niile data banyere n'ụdị maka ndebanye aha ma ọ bụ ikikere. Mgbe mbụ i tinye aha njirimara na paswọọdụ na otu akụ, Opera rịọrọ ikikere ịchekwa ha. Anyị nwere ike ikweta na ịdebanye aha data, ma ọ bụ jụ.
Mgbe ị na-eme ka onye ọbụla na-ede akwụkwọ ikike na weebụsaịtị ọ bụla, ọ bụrụ na i nweelarị ikike, nbanye gị na akụ a ga-apụta ozugbo dịka ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ịbanye na saịtị ahụ n'okpuru logins dị iche iche, mgbe ahụ, a ga-enye nhọrọ niile dịnụ, ma na-adabere na nke nhọrọ ịhọrọ, usoro ihe omume ahụ ga-abanye na paswọọdụ ya na nbanye a.
Ntọala Nchekwa Paswọdu
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịhazi ọrụ nke ịchekwaa okwuntughe maka onwe gị. Iji mee nke a, gafee isi menu Opera na mpaghara "Ntọala".
Ozugbo na Opera Manager Settings, gaa na "Nche" ngalaba.
A na-akwụzi anya ugbu a na ngwugwu "Okwuntughe," nke dị na ntọala ebe anyị gara.
Ọ bụrụ na ịchọtara igbe nlele "Gbaghere iji chekwaa okwuntughe e dere" na ntọala, mgbe ahụ, arịrịọ ahụ iji chekwaa nbanye na paswọọdụ agaghị arụ ọrụ, a ga-echekwa data ndebanye na-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ịchọta igbe dị n'akụkụ okwu ndị a "Kwado ụdị mpempe akwụkwọ na ibe", mgbe ahụ na nke ahụ, ntinye aka na njirimara ikike ga-apụ kpamkpam.
Na mgbakwunye, site na ịpị bọtịnụ "Jikwaa Chekwaa Okwuntughe", anyị nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ na data nke ụdị ikike.
Tupu anyị mepere windo na ndepụta nke paswọọdụ niile echekwara na ihe nchọgharị. Na ndepụta a, ị nwere ike ịchọ iji ụdị pụrụ iche, mee ka ngosipụta nke okwuntughe, hichapụ ihe nrụpụtara ụfọdụ.
Iji gbanyụọ paswọọdụ zọpụta kpam kpam, gaa na ntọala zoro ezo. Iji mee nke a, na nchịkọta ihe nkesa nke ihe nchọgharị ahụ, tinye opra okwu: flags, ma pịa bọtịnụ ENTER. Anyị na-abanye na mpaghara nke ọrụ Opera ọrụ. Anyị na-achọ ọrụ "Chekwaa okwuntughe na akpaghị aka" na ndepụta nke ihe niile. Gbanwee "oke" ndabara na oke "nkwarụ".
Ugbu a, nbanye na paswọọdụ nke ihe onwunwe dị iche iche ga-azọpụta naanị ma ọ bụrụ na ị kwadoro ihe a na nkuzi mmapụta. Ọ bụrụ na ị gbanyụọ arịrịọ maka nkwenye kpamkpam, dị ka akọwapụtara na mbụ, mgbe ahụ ịchekwaa okwuntughe na Opera ga-ekwe omume nanị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ laghachi na ndabara ndabara.
Ịchekwa okwuntughe na nkwalite
Ma nye ọtụtụ ndị ọrụ, ọrụ njikwa nchịkọta nke njirimara njikwa ọkọlọtọ Opera na-ezughị. Ha na-ahọrọ iji mgbatị dịgasị iche iche maka ihe nchọgharị a, nke na-eme ka ikike ịdebe okwuntughe nwekwuo. Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu dị otú ahụ tinye-ons bụ Easy Passwords.
Iji tinye mgbatị a, ịkwesịrị ịga site na Opera menu gaa na ibe ọrụ nke ihe nchọgharị a na tinye-ons. Ịchọta peeji nke "Okwuntughe Ntugharị" site na nyocha ọchụchọ, gaa na ya, ma pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ "Tinye na Opera" iji wụnye ndọtị a.
Mgbe ị wụnye ndọtị ahụ, akara ngosi Paswọdu Easy na-egosi na ngwaọrụ ihe nchọgharị. Iji mee ka tinye-na-aga, pịa ya.
A na windo na-egosi ebe anyị ga-abanye na paswọọdụ site na nke anyị ga-enwe ike ịnweta data echekwara na ọdịnihu. Tinye paswọọdụ achọrọ na mpaghara elu, ma gosi ya na ala. Wee pịa bọtịnụ "Set Master Password".
Tupu anyị egosiputa ndepụta ntinye mkparịta ụka Mfe. Dị ka anyị na-ahụ, ọ na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ọ bụghị naanị ịbanye ederede, kamakwa na-emepụta ha. Iji hụ otú e si eme nke a, gaa na ngalaba "Mepụta paswọọdụ ọhụrụ".
Dịka ị pụrụ ịhụ, ebe a, anyị nwere ike ịmepụta paswọọdụ, chọpụta nke ọma ugboro ole ọ ga - agụ, na ụdị ụdị ihe ọ ga - eji.
E meela paswọọdụ, ma ugbu a, anyị nwere ike itinye ya mgbe ị na-abanye na saịtị a na ikike ikike site na ịpị kọlọtọ na "eriri anwansi".
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọ bụ ezie na ị nwere ike ijikwa okwuntughe jiri ngwaọrụ ndị a wuru ewu nke nchọgharị Opera, nrụnye ndị ọzọ na-agbasawanye ike ndị a.